Sabaimart DJ2210B Active Speaker: Buy Online at Best Prices in Myanmar | Shop.com.mm
Sabaimart DJ2210B Active Speaker
More Audio from SABAIDI
Spend Ks 200,000 get Ks 10,000 off
Product details of Sabaimart DJ2210B Active Speaker
Output Power -160W
Input Channel -Bluetooth/USB/SD/MMC/DVD/Micx2
Control -Bass/Mid/Treble/Eq(Mic Volume,Effect)
FREQ RESPONS - 60Hz - 120 DB
USB , SD slot ပါရှိခြင်းFM နားဆင်နိုင်ခြင်းBluetooth ပါရှိခြင်း Wireless Microphone x2ပါရှိခြင်း Remote Control ပါရှိခြင်းLED Display ပါရှိခြင်းAC / DC အသုံးပြုနိုင်ခြင်းUSB , SD slot ပါရှိခြင်းFM နားဆင်နိုင်ခြင်းBluetooth ပါရှိခြင်း Wireless Microphone x2ပါရှိခြင်း Remote Control ပါရှိခြင်းLED Display ပါရှိခြင်းAC / DC အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
Enjoy your party fully with powerful Active Speaker that deliver the most excellent quality sound experience for music lovers and is specially designed for professionals. It guarantees no deterioration of volume quality with efficient and outstanding design. It is equipped with high performance function. This product is now available at shop.com.mm online shopping mall.
Specifications of Sabaimart DJ2210B Active Speaker
Ratings & Reviews of Sabaimart DJ2210B Active Speaker
Other questions answered by Sabaidi Electronics (3)
Phyoe S. -6months ago
Sabaidi Electronics - answered within3weeks
Speaker size သိလိုပါတယ် ပြီးတော့ Bluetooth ရလား sd card ရလား stick ထိုးလို့ရပါလားခမျ။ Build in memory ပါလား Build in battery ပါလား plug ထိုးပြီးပဲ သုံးလို့ရတာလားရော ပြည့်စုံစွာဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်ခမျ
Alex P. - 8 months ago
၁၂ လက်မ ၊ amplifier ပါပြီးသာ။ usb သုံးလို့ ရမယ်။ ဘထရီ မပါ ပါ။
Sabaidi Electronics - answered within 1 week
အပေါ်မှာ တသိန်းငါးထောင်လို့ပြထားပြီး buy now လုပ်လိုက်ရင် တသိန်းလေးသောင်းကျော်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဘယ်ဈေးနဲ့ရောင်းပေးတာလဲနော်။
shop.com customer နဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီ၊း အကူအညီတောင်နိုင်ပါသည်။